Ifektri Yengane - Abakhiqizi Bezingane baseChina, abahlinzeki
I-GPS Tracker / Ingane / GT-C01
Le modeli tracker yocingo ikakhulukazi yezingane ezisencane, ukubeka nokuxhumana ngezingcingo. Umuntu angabeka ngokunembile indawo esendlini engama-20m ebangeni nangaphandle kwebanga elingama-200m, futhi angasetha ibanga eliphephile ngokubeka uthango lukagesi ukuqinisekisa ukuthi ingane ihlala isendaweni ephephile. Ingalandelela emuva umlando wokulandela umkhondo inyanga engu-1.
Ikhubazekile ekilasini. Kuvimba ukubizwa kwabantu ongabazi, ukuxhumana kwemiyalezo, ukushaywa kwevidiyo nokushaya ucingo kukhawulwe kumalungu axhunywe ku-APP kuphela nohlu lwezinombolo ezirekhodiwe, vimba inkathazo nobungozi.
Idizayini enhle yezingane, ukukhetha okuhle kwezingane.
I-GPS Tracker / Ingane / GT-C02
Le 4G model smart tracker eyenzelwe izingane ezincane, umbala wezingane, ukwakheka nokusebenza. Ngobuchwepheshe obuningi bokulandela ngomkhondo umuntu angathola indawo yezingane ngokunembile ngaphakathi kwe-20m nangaphandle kwe-200m. Lapho ingane ingaphandle kocingo lukagesi olubekiwe iwashi lizohlaba umkhosi, livikele ngokuphelele ukuphepha kwezingane.
Ukuxhumana, imiyalezo yezwi, ikholi yevidiyo nokushaya ucingo kukhawulelwe kumalungu axhunywe ku-APP nezinombolo eziyi-10 ezirekhodiwe, vimba inkathazo nobungozi.
Isebenzela yonke indawo yomhlaba.
I-GPS Tracker / Ingane / GT-C03
Le modeli smart tracker eyenzelwe ingane enemibala egqamile yokugqama. Isebenza njengokubeka kahle indawo, nokuxhumana ngezingcingo.
Ngokuya nge-multi position tech GPS + WIFI + LBS + AGPS, ogqoke iwashi angatholakala ngaphakathi kwe-20m emnyango nangaphandle kwe-200m ndawo. Kungasethwa uthango lukagesi oluningi, uma ogqokile ephuma ezicijile, kuzokwazisa, ukuthi ungaxhumana ngesikhathi esifanele ukuphepha.
Izwi le-HD, ikholi yevidiyo nemiyalezo yezwi, zonke izindlela zokuxhumana nokusebenza okulula. Konke ukuxhumana kunqunyelwe encwadini yezingcingo engu-100, gwema ukuthintana nabantu ongabazi.
Izinga le-IP67 elingangenwa manzi, ungakhathazeki ukuthi oyisebenzisayo udlala ngamanzi, noma ingagqoka lapho ubhukuda. I-Pedometer, kulula ukwakha izivivinyo ezifanele ngokuya ngezidingo zezempilo futhi uqonde isimo sokuzivocavoca sosuku.
Idizayini enhle yemibala yezingane ye-GPS tracker nayo iwashi elihlakaniphile, ikusiza ukuthi uhlale ukwazi ukulandelela izingane zakho, uvikele ukuphepha kwazo. Ubuchwepheshe besikhundla bususelwa ku-GPS + AGPS + LBS + WIFI, ubuchwepheshe obuningi ukulungisa isikhundla ngokunemba kwe-5m, futhi akukho mali eyisisekelo. Ungasetha uthango lukagesi ezindaweni ezithile, uma ucingo luphuma endaweni yokuphepha luzokukhumbuza okokuqala. Futhi uma i-tracker yehla, izokukhumbuza nawe. Futhi ungaqapha imvelo yomuntu ogcina idivayisi ngaphandle kokukhathaza ikholi. Lapho ogqoke idivayisi engena enkingeni ethile, bangacindezela i-SOS ukhiye owodwa ngosizo lwakho. Yonke imisebenzi emangalisayo qiniseka ukuthi izingane zingaphansi kokunakekelwa kwakho, futhi uzokwaziswa ku-1st isikhathi uma kukhona okungahambi kahle.
Futhi iwashi elihlakaniphile, lingashayela ikholi yevidiyo, ikholi yezwi, umyalezo wezwi ngokuxhumana okuphindwe kabili. Futhi konke ukuxhumana kungaphakathi kohlu lwezinombolo zefoni ezirekhodiwe. Ivimbela ukushaya nokuxhumana nabantu ongabazi futhi ivimbele ingozi engaba khona.
Futhi kuqapha impilo, ukushisa komzimba, umfutho wegazi nokushaya kwenhliziyo. Unemininingwane yesikhathi sangempela enemininingwane evela ku-APP.
Isici esigcwele se-tracker esebenza kabanzi sinakekela izingane zakho, zivikele ukuphepha kwazo nempilo, zizuze ukukhula kwazo.
Imodeli ye-GPS tracker eyenzelwe ikakhulukazi izingane ezineminyaka engu-3-12 ubudala, amasudi endawo yomhlaba wonke, imisebenzi esemqoka ukuxhumana, ukulawula impilo, kanye nesimo. Inemibala eluhlaza okwesibhakabhaka, epinki nemnyama yokukhetha.
Umsebenzi wayo wokuma usekelwe kubuchwepheshe be-tech GPS + LBS + WIFI ngokunemba kwe-5m futhi ngaphandle kwenkokhiso eyisisekelo. Ukungeza uthango lukagesi, uzokwazi ukuthi izingane zihlala ngaphakathi kwendawo yokubeka ephephile, uma zithola indawo, i-APP izokwazisa ukuthi uzosazi isimo futhi uthathe isinyathelo. I-tracker inebhethri elikhulu elingasekela izinsuku ezi-5 kokubekwe eceleni, futhi lizokhumbuza uma ibhetri iphansi.
Inomsebenzi wekholi yevidiyo neyezwi kepha ikhawulelwe kuphela ezinhlwini zohlu ezirekhodiwe ezivimba abantu ongabazi nengozi engaba khona. Ayinamanzi ezingeni le-IP67, ukuthi ungakhathazeki ngokuhlupheka okuvela emvuleni noma emanzini adlalayo.
Khulisa ukukhanya, Isitshalo Sikhule Ukukhanya, Ukukhanya kwesitshalo, Khulisa i-Lightin, Isitshalo Sikhule Ngokukhanya, Isitshalo sikhule ukukhanya,